Cadaadis cusub oo soo food saaray aqalka Cad - BBC News Somali
Cadaadis cusub oo soo food saaray aqalka Cad
Image caption Mr Kushner
Guddi ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa ugu baaqay aqalka cad in ay shaaca ka qaadaan faahfaahin ku saabsan saraakiil ka tirsan aqalka cad oo email-ladooda gaarka ah u adeegsaday shaqada rasmiga ah .
Baaritaankan ayaa yimid ka dib markii wiilka uu sodoga u yahay Donald Trump ,Jared Kushner uu qirtay in email-kiisa gaarka ah uu u adeegsaday howlsha aqalka cad.
Wargeyska New York Times ayaa ku waramay in shan sargaal oo kale oo ka mid ah la taliyayaasha madaxwayne Trump ay email-ladooda gaarka u isticmaaleen howsha aqalka cad.
FBI-da oo shaacisay warbixin ku saabsan Hillary Clinton
Baaritaan lagu sameynayo emailada haweeney kaaliye u ah Hillary Clinton
Mr Kushner,oo ah la taliye sare ayaa laga codsaday in dhamaan email-kiisa uu ilaaliyo oo uu kaydiyo.
Xaaskiis,oo ah gabadhada Mr Trump ,Ivanka,ayaa sidoo kale la sheegay in ay howlaha shaqada ay u isticmaashay email-keeda gaarka ah.
Dalabkani ku aadan in arrintan faahfaahin laga bixiyo ayaa ka yimid guddiga dusha kala socda howlaha dowlada iyo isbadalka.
Warqadan dalabka ah ayaa waxa saxiixay Trey Gowdy iyo Democrat Elija Cummings.
Xilligii lagu guda jiray ololihii doorashada ayaa waxa uu madaxwayne Trump balanqaaday in uu xabsiga dhigi doono Hillary Clinton oo xilligaasi lagu eedeeyay in ay emailkeeda gaarka ah u adeegsatay howsha xafiiska wasaarada arrimaha dibadda.